China 4-Ply Synthetic Roofing Rootiing Weelkoolka iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
ShiningPlast 4-Ply Synthetic Roofing Roofing Underlayment waxay siisaa ilaalin wanaagsan saqafkaaga qiimaha badan, sidoo kale rootiyada ka shaqeeya. Waxaan u qaadanay tikniyoolajiyad cusub ujeeddooyinka antiskid iyo ujeedooyinka xoogga leh ee keenaya jihada wanaagsan iyo mawqifka ay ku tiirsan yihiin xididdada.
: Is-koobiyeynta waa ikhtiyaar adiga kuu ah
Kaliya ma ahan oo keliya 4-lakab isku-dul-roon, faa iidada dabiiciga ah ee labada soo-saaraha ee SBPP iyo soo-saaraha PP / PE. Waxaan ka caawinnaa qaab gaar ah oo loo qaabeeyey / embossment on lakabka SBPP si kor loogu qaado jabka iyo sidoo kale tan, si loo sumeeyo astaantaada sidoo kale.
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa glossom-dhammeystiran qaanso gadaal ah oo leh qalab dhejis ah oo gaar ah si loo kordhiyo isku dhaca inta udhaxeysa sagxadda iyo dharka. Waxaan ka dhigi doonnaa labada dhinacba antiskid-ka aslayda ah.
Kordhinta joogtada ah ee qulqulka ShiningPlast ayaa ah muuqaal kale oo xoog leh oo loogu talagalay soo-saareyaasha sheyga saqafka ah. Waxaan wanaajinay habka wax lagu duudduubto marka la barbar dhigo jet-ka biyaha-dhaqameed ee la sameeyay mid ka mid ah si loo hubiyo in taraafikada iyo jeexintu ay gaaraan heer cusub.
Daaweynta UV ee heer sare ah lakab kasta wuxuu ka dhigaa hoos u dhigyada si fiican u xasillan hoosta soo-gaadhista UV muddo-dheer.
• Raagaya: Daawaynta 'ShiningPlast Underlayment' waa Mid Xoog badan oo Waara. Gaar ahaan waxay leedahay jeexitaan xoog leh. Waxay ka ilaalin doontaa roobaadka inuu ka baxo qaybta jeexan.
• Fudud: 'ShiningPlast Synthetic Underlayment' wuxuu lahaa hanti khafiif ah taasoo fududaynaysa in lagu qaado rookaha.
• Antiskid: Qaab qaabeyn qaas ah / qaab dhismeedka ah ee lakabka SBPP si kor loogu qaado jabka. Waxaan sidoo kale u adeegsanaa glossom-dhammeystiran qaanso gadaal ah oo leh qalab dhejis ah oo gaar ah si loo kordhiyo isku dhaca inta udhaxeysa sagxadda iyo dharka. Waxaan ka dhigeynaa labada dhinacba halista ah dulsaarka 'antiiskid' illaa jaalahaaga.
• Caddaynta Cimilada: Tan iyo wajiga bilawga fidinta yarn, waxaan bilaabeynaa inaan daryeelno canug yar oo yar annealing iyo sawiro, waxaanna ku duubnaa looms horumarsan, ilaa T-Die Coating ilaa ay ka dhamaato, waxaas oo dhanna waxay xaqiijinayaan heerka kalasaarashada wanaagsan , tensile / jeexitaan wanaagsan iyo burburin wanaagsan. Badbaadadaada faaska ayaa la hubin doonaa xitaa inta lagu jiro dabaylaha adag ama cimilada xun.
• Caddeynta ilmada: Kaliya maahan meelaynta si buuxda loo kala fidiyey, qulqulka ShiningPlast wuxuu noqon doonaa caddeyn ilmada leh oo ku saabsan xoogga ilkuhu.
• Biyo ma galeen: Si ka duwan godad aad u badan iyo dheellitir u dhexeeya cajalado, ShiningPlast tayo saqafka sare ah ayaa ka dhigaysa hal inji oo kasta oo dharka ka mid ah oo biyuhu ku jiraan.
• U adkaysashada UV: Waxaan u isticmaalnay daaweynta ugu fiican ee UV iyo xasilinta si loo xaqiijiyo xasilinta inta lagu gudajiro mudada dheer ee UV.
• Diirka iyo Caloolka dhajiska ee Stick ayaa la Heli Karo
Tiknoolajiyadda kulul ee dhalaalaysa kulul waxay siisaa macaamiisheenna ikhtiyaar dheeraad ah / shaqo taas oo ah is-adkeysi iskeed ah. Xarkaha ku dhejintu waa sidii loogu talagalay.
Hore: 3-Ply House Wrap
Xiga: Nambarka Nalalka Dhibanaha Nalka